Factory Fitaovana Cable | Mpanamboatra sy mpamatsy fantsom-pifandraisana China
Famaranana hafanana mihena ny famaranana ny tariby
Fivarotana mafana mihena ny famaranana ny tariby fampifangaroana tariby miaraka amin'ny fifandraisana amin'ny hafanana. Ny vokatra dia kely amin'ny habe, lanja maivana, fampisehoana azo antoka, fampifanarahana matanjaka, fametrahana mora ary vidiny ambany. Ampiasaina be izy io amin'ny fifandraisana an-tariby ivelany sy ivelany tariby mpampifandray. Izy io koa dia be mpampiasa amin'ny famatsian-kery amin'ny fananganana herinaratra sy fanamboarana sambo. Fananan-kevitra Fomba fitiliana mahazatra Fomba fitsapana hery (MPa) ≥10.4MPa ASTM D 2671 E ...
kojakoja fampangatsiahana mangatsiaka
fantsom-pifandraisana mangatsiaka mangatsiaka 1. Fahaiza-manao azo itokisana dia vita avy amin'ny import-SiR (Silicone Rubber) miaraka amin'ny insulation elektrika mahafa-po, fanoherana ny elastika miavaka, fanoherana ny harafesina sns, ary koa ny fahaizan'ny herinaratra ekena sy ny androm-piainana maharitra. Izy io dia afaka manome tsindry maotina maivana amin'ny tariby amin'ny fotoana rehetra mba hahatonga ny fifandraisana hifanaraka aorian'ny fametrahana azy. Izy io koa dia hanitatra na hihena miaraka amin'ny tariby mba hisorohana ny fahombiazan'ny tampony sy ...